FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA MPIANDRY ONDRY ANATOLIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika mpiandry ondry Anatolianina
Woodyacres Lehilahy Anatolianina Cenk Koda aka Koda amin'ny 18 volana— 'Koda dia be dia be ny asa amin'ny maha-alika azy, fiaraha-miasa mafy, fifehezana mafy nefa be fitiavana, ary fotoana be no nampiraisana vola. Saingy mendrika izany isaky ny fotoana. Koda dia namana mahafinaritra. Nandalo ny Canine Good Citizen izy ary ankehitriny dia manofana ho an'ny alika fitsaboana amin'ny alàlan'ny fahazazany 18 volana. Ary mampihomehy ahy isan'andro izy. '
Lisitry ny alika mpiompy mpiompy Anatolianina
Ny Alika mpiandry ondry Anatolianina dia mpiambina biby goavambe, goavambe ary matanjaka. Izy dia tena mitovy amin'ny Pyrenees mahafinaritra ary ny Pooch , saingy mahia sy mailaka kokoa. Mifanaraka tsara amin'ny loha sisa amin'ny vatana ny loha, lehibe sy matanjaka, boribory somary misy fijanonana kely ihany. Matetika mainty ny molotra ary mahitsizoro ny endrika. Maintso ny molotra ary mihantona somary somary miforitra tokony tsy ho be loatra. Ny molotra ambony dia tsy tokony hahantona ambany noho ny sisin'ny valanorano ambany. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny kaikitry ny hety, fa ny manaikitra ambany kosa dia ekena arakaraka ny fenitra voasoratra. Ny sofina telozoro sy pendant dia tokony hapetraka tsy ambony noho ny lohan'ny loha. Tokony ho miendrika V amin'ny tendrony boribory izy ireo ary mainty matetika. Any Torkia, matetika ny sofina dia fohy ihany. Ny maso dia somary salantsalany, atokana, miendrika almond ary volontsôkôlà manopy maitso. Mainty ny alim-borona amin'ny alika rehetra, afa-tsy ireo misy lokon'ny aty, izay volontsôkôlà misy orona volontany. Masiaka ny tendany, somary arched, matanjaka, hozatra ary somary manana afony. Hiseho ny haavon'ny topline rehefa mihetsika ny alika ary somary boribory eo am-balahany. Lalina ny tratra ary mahatratra ny kiho. Ny lamosina dia matanjaka, hozatra ary ambaratonga fohy raha oharina amin'ny halavan'ny tongotra. Ny tongotra eo anoloana dia tokony hahatratra moramora tsy misy mikapoka mazava sy mahitsy ary milamina tsara. Atao avo kokoa ny rambony. Tokony ho lava sy mahatratra ny hock izy io. Rehefa milamina dia entina ambany ary aolaka ambony ny farany. Rehefa mailo, ny rambony dia avo avo, manao 'kodiarana'. Ny kalesy ambany sy ny kodiarana dia azo ekena rehefa mandeha. Ny kalesy 'kodiarana' dia aleony amin'ny peratra fampisehoana. Ny rambo dia tsy voatery ho unsurl tanteraka. Ny palitao fohy na marokoroko dia mazàna miaraka amin'ny saron-tava mainty, na dia ny loko sy ny marika rehetra aza dia azo ekena ao anatin'izany ny pinto, ny fotsy ary ny brindle. Ny palitao dia lava kokoa manodidina ny vozon'akanjoko sy ny rambony. Ny halavany dia hiova arakaraka ny razamben'ny alika sy ny vanim-potoana. Misy karazany roa ny palitao fototra: salantsalany halavany ary antonony lava.
The Anatolian Shepherd dia mpiambina andian'ondry manana fahitana ambony sy fahitana. Tsy alika mpiandry izany. Izy io dia tena mahatoky, mailo ary afaka mihazakazaka haingana sy maharitra. Izy io dia manan-tsaina, mailaka ary mora zatra, nefa tsy alika ho an'ny vao manomboka. Mila mpikarakara izay mazava ho azy taratra fitarihana . Mahaleo tena, milamina, tsy mihetsika ary be herim-po, nefa tsy mahery setra, mirona hivoaka amin'ny alina izy ireo ary raha miara-mipetraka aminao izy ireo dia mila manitsy izany fihetsika izany raha tsy ilaina izany. Koa satria mpiandry ondry teraka ny Mpiandry Anatolianina dia ho mailo be izy ary mety hanana fananana raha tsy tazonina amin'ny toerana mety azy ambanin'ny olombelona. Raha mahita ny tenany ambonin'ilay fianakaviana izy dia mety hihetsika fitiavana amin'izy ireo fa mampiahiahy be ny olon-tsy fantatra amin'ny toe-javatra iray izay misy olana. Ity dia olana iray izay mampatahotra indrindra rehefa lasa olon-dehibe ilay alika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fahitan'ny alika ny olombelona ho lehibeny. Amin'ny maha mpiambina andian'ondry azy dia hanana toe-tsaina voaaro hatrany izy io ary tsy azo esorina na hatsangana io, na izany aza, ny alika izay manaiky ny olombelona ho mpitarika azy dia hanaiky ireo vahiny izay ampahafantarin'ny olombelona azy ireo amin'ny fomba ofisialy. Hijery ny olombelona ihany koa izy ho toy ny mpanapa-kevitra. Tsy mila alika mitovy habe sy tanjaka hipetraka ao an-tranonao manao antso rehetra ianao. Ilay mpiandry ondry Anatolianina dia mbola hanana fananana sy fananana ihany, tsy mamela olona hiditra raha tsy ao an-trano ny tompony, raha tsy hoe nifandray matetika tamin'ilay olona izy. Horaisina ny sakaizan'ny fianakaviana. Ity alika mpirehareha ity dia mitaky ny tenany, ary mety ho maditra sy manjaka raha mahita ny tenany ho mpitarika ny trano. Rehefa mampiofana ny mpiandry ondry Anatolianina, ny vokatra tsara indrindra dia azo amin'ny alàlan'ny fomba fiofanana manentana amin'ny fomba feno finiavana, hentitra, matoky, maharitra ary be fitiavana. Tsy alika ho an'ny tompona passif na tompona izay tsy mahatakatra instine canine . Tena zava-dehibe ny manomboka fiofanana faran'izay haingana araka izay azo atao, satria ny alika efa lehibe dia mety ho mahery sy lehibe loatra ka tsy ahitsy amin'ny olona eo ho eo. Ny tompon-trano izay tsy mampiseho voajanahary, matanjaka be, fa na dia maotona aza, ny fahefana amin'ny alika dia hahita ny alika hanana ny heviny ary hankato ny baiko fantatra raha tsy te hanao izany. Mahatsapa ny fananarana ary mazoto te hanana firaiketam-po, ity karazana ity dia manam-paharetana sy miaro amin'ny zanaky ny fianakaviana, saingy mety hamotika azy ireo tsy nahy. Ny ankizy dia tokony harahi-maso sy ampidirina tsara. Matoky tena ny Mpiandry Anatolianina fa tsy mila fiofanana fiarovana fanampiny. Izy io dia efa manana instincts fiarovana mahery vaika izay hihamatanjaka rehefa matotra ilay alika. Ireo instincts ireo dia hahatratra eo amin'ny iray taona sy sasany. Amin'ny ankapobeny dia hiaraka amin'ny biby hafa izy ireo raha efa nampahafantarina azy ireo tamin'izy mbola kely. Mety hanjakazaka amin'ny alika hafa izy ireo ary zava-dehibe izany hifanerasera izy ireo raha mbola tanora. Ireo alika ireo dia mihamatotra miadana, tonga amin'ny fahamatorana feno efa-taona eo ho eo.
Ny alika izay hiasa ho mpiambina andian'ondry dia tsy tokony ho biby fiompy ao an-trano na aleon'izy ireo ny fianakaviana noho ny biby izay tokony ho ambenany. Mila ampifandraisina amina olona tonga any an-tsaha izy ireo ka ahafahan'izy ireo mahazo fikarakarana ara-biby sy izay fikolokoloana ilaina, fa tokony hiaina ny androm-piainany manontolo miaraka amin'ny andian'ondry ary tsy entina ao an-trano miaraka amin'ny olombelona. Tokony hatao io fiaraha-miasa io raha alika alika ny alika. Handeha ny sisin-tanin'ny faritanin'izy ireo isak'alina ireo Anatolianina, avy eo hahita toerana avo handry hijerena ny fiampangana azy ireo. Isaky ny ora vitsivitsy dia hifoha izy ireo ary handeha manodidina ny andian'ondriny indray mba hahazoana antoka fa milamina ny rehetra. Raha mahatsikaritra loza izy ireo dia hanome hodi-kazo fampitandremana lalina. Raha tsy mampatahotra ny fandrahonana izany dia hohamafisin'izy ireo ny hodi-kazo, hataony matotra kokoa ary hampandre ny andian'ondry hivory ao aoriany. Raha mitohy ny loza ary manakaiky ny andian'ondry dia hanafika ny Anatolianina, saingy voatahiry hatrany ho toy ny vahaolana farany. Fifaneraserana aloha be, fanofanana fankatoavana SY fanapahana manjaka tsy tapaka dia tena zava-dehibe rehefa manana Mpiandry Anatolianina.
Haavony: Lehilahy 28 - 30 santimetatra (71 - 76 cm) Vehivavy 26 - 28 santimetatra (66 - 71 cm)
Milanja: Lehilahy 100 - 150 pounds (45 - 68 kg) Vehivavy 90 - 130 pounds (41 - 59 kg)
Mora amin'ny hypothyroidism na amin'ny entropion amin'ny hodi-maso. Hip dysplasia dia misy, fa tsy dia mahazatra toy ny amin'ny karazany lehibe hafa. Izy ireo dia mora tohina amin'ny fanatoranana. Ny tsimatimanota ataon'ny mpiandry ondry Anatolianina dia matetika no ela kokoa vao mitombo noho ny amin'ny karazany maro hafa ary noho izany dia tokony hiresaka amin'ny mpitsabo anao ianao momba ny fanomezana vaksiny fanampiny an'ny tanora Anatolia amin'ny Parvo-virus.
Ny mpiandry ondry Anatolianina dia tsy tokony hatao amin'ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Ity karazana ity dia mampiahiahy be amin'ny olon-tsy fantatra, ary noho izany ilaina ny manome tokotany azo antoka sy fefy.
Mila fampihetseham-batana betsaka ity karazany ity. Manao izay tsara indrindra izy ireo rehefa afaka mihazakazaka afaka ao an-tokotaniny, nefa mbola mila manohy ihany mandeha lava isan'andro . Mahomby indrindra amin'ny asa atao mba hiarovana andian'ondry.
Ity karazana ity dia mitaky fikarakarana kely. Ny palitao dia mila miborosy tanteraka mandritra ny vanim-potoana roa taona mandavantaona. Afaka miala amin'ny tsy fijerena kely ianao amin'ny sisa amin'ny taona. The Anatolian Shepherd dia mpanamory vanim-potoana sy mavesatra.
Ny mpiandry ondry Anatolianina dia teratany Azia Minora. Izy io dia miaro ny andian'ondry ary miara-miasa amin'ny mpiandry ondry. Ao amin'ny lemaka Anatolianina avo dia mafana sy main-tany ary maintso ny ririnina. Ny alika mpiandry ondry Anatolianina dia afaka miaina ivelan'ny taona mandavantaona. Nandritra ny taonjato maro dia nampiasaina ho alika mpiady amin'ny ady sy amin'ny fihazana ireo razan'ilay Mpiandry Anatolianina. Tena sarobidy tamin'ilay ady fandresena azony niadiana tamin'ny amboadia. Ny vahoaka tiorka dia nametaka loko nasiaka tamin'izy ireo mba hiarovana ny hatony tsy ho voan'ny biby mpiremby izay nanafika ny fiampangana azy ireo. Amin'ny maha-alik'ondry azy, tsy nisy nanelingelina azy na ny havizanana na ny toetr'andro ratsy. Ankehitriny dia mbola ampiasaina ho toy ny alika ondry ary koa alika mpiambina. Ny Mpiandry Anatolianina dia mifandray akaiky amin'ny Alika Kangal ary ny olona sasany aza dia manambara fa ny mpiandry Tiorka rehetra dia ny Kangal Dog, ho karazany iray, ny Anatolian Shepherd, na izany aza ny tena Dogs Kangal Tiorka dia voalaza fa karazany misaraka amin'ny alika mpiandry ondry tiorka. Ny toe-piainana ara-tantara mitoka-monina ao amin'ny faritra Sivas-Kangal dia nahatonga ny fivelarana ny Kangal Dog ho karazana miavaka iray izay nambara ho National National of Turkey ary harem-pirenena. Ny tena Alika Kangal Tiorka no mpiandry ondry miasa voalohany indrindra. Ny fanondranana ireo alika Kangal madio avy any Torkia dia voafehy ary efa voarara tanteraka izao. Ny Kangal Dog Club of America dia manohy miasa mba hanamorana ny famerana ny fanafarana. Ny alika nafarana dia heverina ho sarobidy indrindra amin'ny mety ho fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny dobo ara-pirazanana any Etazonia. Ny Anatolian Shepherd dia neken'ny AKC tamin'ny 1995.
Amin'izao fotoana izao, misy mihoatra ny 3000 ny mpiandry ondrilahy Anatolianina voasoratra any Etazonia. Ny Anatolia dia azo soratana amin'ny Anatolian Shepherd Dog Club of America sy Anatolian Shepherd International.
'I Jolly, mpiandry ondry Anatolianina antsika efa-taona izao. Tsy mivadika izy, be filalaovana, ary mahafinaritra amin'ny ankizy nefa tia mandehandeha toy ny mpiandry ondry rehetra. Na eo aza ny habeny dia malemy fanahy amin'ny alika sy olona hafa izy nefa mailo amin'ny olon-tsy fantatra. '
'Ity i Bastian. Nalaiko ity sariny ity fony izy 4 volana. Izy dia mpiandry ondry Anatolianina pinto, ary lazaiko fa tandindon'ny taranany izy. Tena mahatoky izy, manan-tsaina ary mafy loha loatra ! Mpianatra haingana dia haingana izy, ary milamina tsara ho an'ny zazakely kely toy izany. Izy no iray amin'ireo lehibe indrindra amboa manoa Efa nahita aho. Tsy entin'ny sakafo akory izy ka somary sarotra ny fampiofanana (fa ny tena izy dia mianatra haingana mandanjalanja kely ihany). Tena alika olona izy, na dia tiany aza ny fotoana filalaovany ao amin'ny zaridaina alika . '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ilay mpiandry ondry Anatolianina
Sary mpiandry ondry 1
Sary mpiandry ondry 2
Atsinanana Region terrier sy ny dachshund Mix
coton de tulear mifangaro karazany
ratsy ve ny katsaka amin'ny sakafon'ny alika?
fanofanana vilany fako alika kely